Differences between students and workers: the roles required by others | Mycanvas
Differences between students and workers: the roles required by others
[Differences on roles between students or workers]
ကျောင်းသားဘဝတုန်းကအချိန် နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်တဲ့အချိန် ကွာခြားတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲ? သင်ဒီမေးခွန်းကို ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေကိုယ်စား ကလေးတွေကို knowledge sharing အနေနဲ့ ပြောပြနိုင်ပါဖူးပါသလား?
အတန်းပညာတွေသင်ယူပြီးလို့ ဘွဲ့ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ Adult Life ဆိုတာ သင်စိတ်ကူးယဉ် တွေးထင်ဖူးတာတွေနဲ့ ကွာခြားနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ သင်အမှန်တကယ် အံ့အားသင့်မိမှာပါ…သင် သတိထားမိသည်နှင့်အမျှ ကျောင်းမှာစာသင်ရတဲ့အချိန်နဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဘဝ အင်မတန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Business Person တစ်ဦး အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တိုဖော်ပြပေးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမှတ်သားထားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အတွက်အကျိုးရှိစေမှာ အသေအချာပါပဲ…
[စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်လူမှုရေးတာဝန်များ]
အကယ်၍ သင်ဟာလေ့လာသင်ယူခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် ဒါဟာ သင်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်ရတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားသူများနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်မှာတာဝန်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူး။ သင်ဟာ ဝင်ငွေအများကြီးမရှာနိုင်တဲ့အတွက် သင့်မှာ လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။
သို့သော်လည်း သင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့အခြားအရာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင့်ရဲ့မျော်လင့်တဲ့အရာတွေဟာ လုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ သင့်ဘက်ကချည်းပေးနေရတဲ့အစား သင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီမှ (သို့မဟုတ်) သင့်ရဲ့ Client များနဲ့ Customer များထံမှဝင်ငွေ (လစာ) ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို သင်ဘာအတွက်ကြောင့် လစာ ရနေတာလဲ? သင်တွေးကြည့်ဖူးသလား? အဖြေကတော့ သင်သည် တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုခု (သင့်လုပ်အား) ကိုပေးမှသာ သင်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုများ (သို့) ပံ့ပိုးမှုများအတွက် အခြားသူများ၊ ကုမ္ပဏီများနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ငွေလက်ခံရန်အခွင့်အလမ်းများရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လစာများများ၀ င်ပြီး လွတ်လပ်စွာနေနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ Business person တစ်ဦးအနေနဲ့ လူမှုရေးတာဝန်များကို လုပ်ဆောင်ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ သင့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့တာဝန်တွေကို နားလည်ပြီဆိုရင်တော့ သင်အလေးပေးလုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) နေထိုင်မှုပုံစံ (Lifestyle) : သင်သည်အစားအစာ၊ အိပ်စက်ခြင်း နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ကောင်းမွန်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့်နေထိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
(၂) သင်ယူခြင်းအလေ့အကျင့် (Learning Habit) : သင့်မှာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းမရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။
(၃) လူ့အဖွဲ့အစည်းမှဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက် (Assessment from society) : သင့်အတွက်အကဲဖြတ်မှုသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းတို့အပေါ်တိုင်းတာပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ကျောင်းတွင်းအကဲဖြတ်မှုကတော့ သင်ခန်းစာများကိုနားလည်မှုရှိမရှိ၊ ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းအပေါ်တိုင်းတာပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
ဒီအတွေးအခေါ်တွေကတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျင့်သုံးသင့်သောကိုယ်ကျင့်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ဒီအချက်တွေကိုအမြဲသတိတရရှိပြီးသင့်ရဲ့လူမှုရေးတာ၀န်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးစားလိုက်ပါ!!